Home Wararka Kooxihii Farmaajo iyo Fahad taageersanaa oo bilaabay in ay qaataan Shahaadada
Kooxihii Farmaajo iyo Fahad taageersanaa oo bilaabay in ay qaataan Shahaadada
Kooxihii Farmaajo iyo Fahad taageersanaa ayaa bilaabay in ay qaataan Shahaadada iyaga oo ka biyo diiday hadalkii ka soo yeeray madaxda Dowlad Goboleedyada xulufada la ahaa. Waxaa maanta la arkaayay xildhibaano ka soo jeedo Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed oo shaahada qaadanayay.
Muuse Geelle Yuusuf Guddoomiyaha Guddiga Hirgelinta Doorashooyinka Dadban heer Federaal (FEIT) ayaa Xildhibaannada iyo senatarada ka maqan Muqdisho ugu baaqay in ay soo gaaraan si ay u qaataan shahaadada rasmiga ah iyo aqoonsiga.
Geelle ayaa sheegay in maanta la diiwaangelinayo Xildhibaanno iyo Senataro diyaar u ah qaadashada shahaadada & Aqoonsiga, howshaan ayuu tilmaamay in ay soconeyso illaa inta laga gaarayo waqtiga loo qabtay in la dhaariyo Baarlamaanka 11aad ee JFS.
“Shahaado siinta Xildhibaannada iyo Senatarada labada Gole ee Baarlamaanka Federalka waa mid weli socota waxaa qadka kusoo jiro Xildhibaanno doonaya in ay qaataan, Mudanayaasha ka maqan Muqdisho in ay soo xaroodaan si howsha shahaado bixinta & dhaarta loogu gudbo si ay ugu gudbaan aqalkooda ama xaruntooda Baarlamaanka” ayuu yiri Guddoomiyaha FEIT Muuse Geelle.
Previous articleC/wali Gaas oo la saftay Fahad iyo Farmaajo, kuna baaqay in lasii daayo kuraasta laga reebay liiska barlamaanka
Next articleShacabka Muqdisho oo maanta loo diiday inay maraan wadooyinka Muqdisho